प्रेमीसँग अलग बसेको एक बर्षपछि यी नायिका कसरी भइन् गर्भवती ? अब भएनत बबाल – PathivaraOnline
Home > बलिउड > प्रेमीसँग अलग बसेको एक बर्षपछि यी नायिका कसरी भइन् गर्भवती ? अब भएनत बबाल
Poonam June 18, 2021 June 18, 2021 बलिउड, मनोरञ्जन, समाचार	0
विगतमा भारतीय तृणमूल कांग्रेसका सांसद र बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहा गर्भवती भएको खुलेको छ । उनी आफ्ना प्रेमीसँग अलग बसेको एक बर्ष भन्दा बढि भएको आफैंले बताएकी छिन् । अहिले उनी को बाट गर्भवती भएकी हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनले यसको उचित जवाफ भने मिडियालाई दिएकी छैनन् ।
यसअघि नुसरत र उनका प्रेमी निखिल जैन अलग अलग भएको खबर आएको थियो । भनिन्थ्यो कि नुसरत निखिल भन्दा टाढा छिन् । अब अभिनेत्री आफैले आफ्नो प्रेमी र बिहे बारेको कुरा बाहिर ल्याएकी छिन् । भर्खरै नुसरत जहानको पेटमा बच्चा रहेको खबर आएको थियो, जसमा निखिलले भने कि उनलाई नुसरतको त्यस्तो बारे थाहा थिएन । यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए त्यो बच्चा मेरो होइन ।
निखिल भन्छन् कि तिनीहरू छ महिना यता सँगै छैनन् । अब नुसरत जहानले निखिल जैनसँगको उनको विवाह मान्य छैन भनेर भनेकी छिन् । यो कुरा नुसरतले एक विज्ञप्ति जारी गरेर धेरै खुलासा गरेका छन् । नुसरतले २०१९ मा व्यवसायी निखिल जैनसँग विवाह गरेकी थिइन् । दुबैको विवाहको तस्वीरहरू सोशल मीडियामा भाइरल भएको थियो ।
नुसरतले एक विज्ञप्तिमा भनिन्, विदेशी भूमिमा भएकोले, टर्की विवाह नियमावली अनुसार हाम्रो विवाह अमान्य छ । साथै, किनकि यो दुई धर्मका मानिसबीचको विवाह हो, यसलाई भारतमा कानुनी मान्यता दिन आवश्यक थियो तर यो भएन । हामी सँगै बस्यौ तर अब यसलाई बिहे भन्न मिलेन । लिभ इन टुगेदर भन्न सकिन्छ ।